Ngaba ukhawuleza wakho ice cream? Zama le recipe ye- ice cream esheshayo kwaye kulula usebenzisa i- ice emile . I-ayisikrimu iphuma nge-carbonated, ngoko ithetha kakhulu.
Gwema ukuthinta iqhwa elomileyo. Kubanda ngokwaneleyo kukunika isithwathwa.
Uvavanye i-ice cream ngaphambi kokuba uyidle ukuze uqiniseke ukuba ayibanda kakhulu. Ukuba i-ayisikrimu ithambile, kuhle ukutya. Ukuba iqhaqhazela kakhulu, makumfudumise kancane ngaphambi kokumba.
I-Ice Ice Cream Ingredients
Iikomityi ezi-2 zekhrimu enzima
2 iikomityi zesiqingatha nesigamu
3/4 indebe ishukela
2 amathisipuni i-vanilla extract
1/8 ithispoon ityuwa
Yenza iCream Ice Ice cream
Okokuqala, kufuneka utyumle iqhwa elomileyo . Yenza oku ngokubeka i-ice yakho eyomileyo kwipokethi yephepha kwaye mhlawumbi uyitshitshise nge-mallet okanye isando okanye uqhube phezu kwesikhwama usebenzisa ipini.
Hlanganisa zonke ezinye izithako kwisitya esikhulu sokuxuba. Ukuba ufuna i-chocolate ye-ayisikrimu esikhundleni se-vanilla ice cream, engeza 1 inkomishi yesiraphule.
Dlulisa i-ice cream eyomileyo kwi-ayisikrimu, encinci ngexesha, ukuxuba phakathi kwongeziweyo.
Njengoko ukongeza ngaphezulu iqhwa elomileyo, liya kuqalisa kwaye luya kunzima ukudibanisa. Qhubeka uneza i-ice eyomileyo uze i-ice cream ifinyelele ukuhambelana okufunayo.
Zive ukhululekile ukukhupha kwiingqungquthela okanye i-candy pieces.
I-ice cream ingabanda kakhulu ! Sebenzisa unonophelo xa ulitya ukuze ugweme i-frostbite. Ukuba i-ayisikrimu ithambile ngokwaneleyo ukuyivuselela okanye ukuyikhupha kufuneka ifudumele ngokwaneleyo ukuba idle ngokukhuselekileyo.
Unokufakela umnqweno i-ice cream eseleyo ukuze udle kamva.
I-Chocolate ye-Ice Ice Cream Recipe
Ngaba ukhetha ushokoleta? Nantsi iresiphi elula ukuze uzame ngaphandle kwamaqanda okanye imfuno yokuqhafaza ishokoleta. Kulula!
Iikomityu ezi-2 zithwala i-cream cream
I-1 inokubilisa ubisi olunamanzi
I-1/2 indebe engenayo i-cocoa powder
1 ithispoon i-vanilla extract
Yenza iCream Cream
Ukuhambisa isiskrini esinzima ukuze wenze iintonga ezinzima.
Kwisitya esahlukileyo, xubana nobisi olunomlilo ococekileyo, i-cocoa powder, ityuwa kunye ne-vanilla.
Nciphisa iqhwa elomileyo.
Gcwalisa enye ikremu enzima kumxube wobisi obonisiweyo.
Yongeza enye iqhwa elomileyo.
Fold kuyo yonke ikhilimu ehlanjulweyo ukuze ufumane i-ice cream efanayo.
Yongeza lonke iqhwa elomileyo, elincinci, kuze kube yilapho likhululeka.
Yidla i-ice cream ngokukhawuleza ukuze ujabule ukuthungwa kwe-bubbly. Unokufakela umnxeba.
Iqhwa elomileyo liqine ngakumbi kunefriji yasekhaya, ngoko lenza umsebenzi omhle wokuqandisa ice cream. Iqhwa elomileyo i-carbon dioxide eqinile eyenza i-sublimation itshintshe kwifom eqinileyo ibe yi-carbon dioxide gas. Ezinye ze-bubble dioxide bubbles zibanjwe kwi-ice cream. Ezinye zazo zichaphazeleka kunye nezinye izithako. I-ayisikrimu e-carbonate ine-flavour e-tangy encinane, enjengaleyo yamanzi e-soda. Ngenxa yokuba i-flavour iyahluke, unokukhetha ukhenkri ekhwankqisayo phezu kwe-vanilla ephantsi.
Iingcamango zePlay Party
15 Iingcamango ezingabantwana (kunye nabantu abadala) Ngaba malunga neenambuzane
Ngaba Ndingathatha i-SAT Nangona Ndingazange Ndilahleke Ukubhaliswa komhla wokugqibela?
Indlela yokuyila iProgram yePal Pal kwiKlasi lakho